မာရှယ် မပါ ၊ ရှော မပါတဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်း . . . ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ပွဲမှာ ဘယ်လို လူစာရင်းကို သုံးမှာလဲ - SPORTS MYANMAR
မာရှယ် မပါ ၊ ရှော မပါတဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်း . . . ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ပွဲမှာ ဘယ်လို လူစာရင်းကို သုံးမှာလဲ
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ပရီးမီး ယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၃ ) အဖြစ် ယနေ့ ညနေ မှာ ဆောက်သမ်တန် အသင်း ရဲ့ အိမ်ကွင်း ကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရတော့ မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီပွဲ ဟာ ၃ ပွဲ မှာ ၁ ပွဲသာ နိုင်ထားတဲ့ ယူနိုက်တက် အတွက် တော့ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ပါ ။ လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ အားထား ရတဲ့ ပွဲထွက် ကစား သမား ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိ ထားတာ ကြောင့် လူစာရင်း အပြောင်း အလဲ တွေ မြင်တွေ့ ရနိုင် ပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှုး အန်တိုနီ မာရှယ် ဟာ ပဲလေ့စ် နဲ့ ပွဲ ပြီးခါ နီးမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားပြီး အားထုတ် ကစား ခြင်း မပြုနိုင် တော့ တာကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ လုခ်ရှော ကတော့ ဆက် မကစားနိုင် တော့တာ ကြောင့် အက်ရ်ှလေယန်း နဲ့ လူစားလဲ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ သူတို့ ၂ ဦး စလုံး ယနေ့ ည ပွဲကို လွဲချော် ကြမှာပါ ။
ဒီလို အချိန် မှာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ဟာ အင်တာ မီလန် ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ သလို ခံစစ်မှုး ဖြစ်တဲ့ ခရစ်စမောလင်း ကလည်း ရိုးမား ကို အငှား ထွက်သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒဏ်ရာ ကစား သမားတွေ ရှိနေချိန် မှာ ပွဲထွက် ကစားနိုင်တဲ့ သူ အချို့ ကို လက်လွှတ် လိုက်ရတာ ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် အားနည်းချက် ဖြစ်လာ စေနိုင် ပါတယ် ။
ဒါကို ဆိုးရှား ဘယ်လို ပြင်ဆင် မလဲ . . . နော်ဝေသား နည်းပြကြီး ကတော့ အသင်း ကို လူငယ်တွေ နဲ့ သာ တည်ဆောက် ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထားပြီး အသက်ကြီး ကစား သမားတွေ ကို ရှင်းထုတ် ၊ နေရာ မပေး တာတွေ လုပ်ဆောင် နေပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို လက်ထက် ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်မှာ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ မာတစ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ပွဲ စလုံး မပါခဲ့ရ ပါဘူး ။ ညာ တောင်ပံ မှာ ၀င် ကစားခဲ့ရတဲ့ မာတာ ကလည်း လူစားဝင် အဖြစ် နဲ့ သာ ကစားခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဆိုးရှား ရဲ့ အသင်း ဟာ ပွဲစဉ်တိုင်းမှာ အသက် အငယ်ဆုံး အသင်းစာရင်းထဲ ကို ၀င်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲ ကိုလည်း ဆိုးရှား ဟာ လူငယ်တွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု ပေးသွား ဦးမှာပါ ။ ဘယ် နောက် ခံလူ နေရာ ကတော့ ရွေးစရာ မရှိတဲ့ အတွက် အက်ရ်ှလေယန်း ကို ပြန်ထည့် ရတော့ မှာပါ ။ ဒါဟာ ဒီဂီယာ တစ်ယောက် ဒီပွဲ မှာ ကပ္ပတိန် မဖြစ်တော့ ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပါပဲ ။
မာရှယ် ရဲ့ နေရာ အတွက်တော့ မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် ကို နေရာပေး ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဆိုးရှား အတွက် တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ အလောင်းအစား ဖြစ်လာမှာပါ ။ ဂရင်းဝုဒ် ဟာ မာရှယ် ၊ ရက်ဖိုဒ့် တို့ ထက် ပိုပြီး အဆုံးသတ် ကောင်းကြောင်း ဆိုးရှား ကိုယ်တိုင် ကြွားလုံးထုတ် ထားခဲ့ ပါတယ် ။ သူပြောတာ မှန် မမှန် ဆိုတာ ဒီည စောင့်ကြည့် ရတော့ မှာပါ ။
ပရိသတ်တွေ လုံးဝ မကြိုက်ပေမယ့် ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ကတော့ ပါလာဦးမှာပါပဲ ။ သူ့လို ပြိုင်ဘက် ကစားကွက် ထဲ ကို ၀င်ရှုပ်နိုင်တဲ့ ၊ ပြိုင်ဘက် ကစား သမားတွေရဲ့ ပေးပို့မှု တွေ နောက် ကို တောက်လျောက် လိုက်ပြီး ဖိအားပေး နိုင်တဲ့ ကစား သမား မျိုးက များများ စားစား မရှိ ပါဘူး ။ လင်ဂတ် ရဲ့ အခြားအရည်အသွေးတွေက မေးခွန်း ထုတ် စရာရှိပေမယ့် ဆက်တိုက် ဖိအားပေးနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးက အင်္ဂလန် မှာရော မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် မှာပါ နေရာ ရရှိစေခဲ့ တာ လို့ ဆိုရင် မှားနိုင်မယ် မထင် ပါဘူး ။
ယူနိုက်တက် ရဲ့ တိုက်စစ်မှာ အရေးပါတဲ့ တောင်ပံ ၂ ဖက် ကိုတော့ မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် နဲ့ ဒန်နီ ရယ် ဂျိမ်းစ် တို့ ပွဲထွက် လာမှာပါ ။ ဂျိမ်းစ် ဟာ ပဲလေ့စ် နဲ့ ပွဲ တုန်းက ဒုတိယပိုင်း မှာ ဘယ်တောင်ပံ ကို ပြောင်း ကစားခဲ့ရပြီး ညာတောင်ပံ မှာ ထက် ဘယ်တောင်ပံ မှာ ပိုကောင်းအောင် ကစားနိုင်ကြောင်း မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒီည မှာ ဂျိမ်းစ် ကို ဘယ်တောင်ပံ ၊ ရက်ဖိုဒ့် ကို ညာတောင်ပံ မှာ နေရာ ချ ထားမယ် ဆိုရင် ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ တိုက်စစ် ကစားပုံ ကို ရရှိ နိုင် ချေရှိ ပါတယ် ။
ကွင်းလယ် မှာတော့ တော်မီနေး နဲ့ ပေါလ် ပေါ့ဘာ တို့ ကို ဆက်လက် မြင်တွေ့ ရဦးမှာပါ ။ ပေါ့ဘာ ကတော့ အေသုံးလုံး ဓါတ်ခဲ တွေ အကြားရောက်နေတဲ့ ယူရေနီယံလောင်စာတောင့်ကြီးလို ပါပဲ ။ ဒီအနေအထား ကို ပေါ့ဘာ မနှစ်သက်ပေမယ့်လည်း ပြင်သစ်သား ကို ယူနိုက်တက် က မရ မက ဆွဲထား ဦးမှာပါ ။ ဒါကြောင့် ပွဲတွေ ကို ဆက်ကစားမလား ၊ ပုန်ကန် ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း မဆင်းဘဲ အသင်းနဲ့ ပြဿနာ တက်ပြီး အရန် အသင်း ကို ရောက်သွား မလား ၊ ပေါ့ဘာ က ဒီလောက်တော့ မိုက်မဲမယ့် သူ မဟုတ်ပါဘူး ။
နောက်တန်း ကတော့ ရှော နေရာ ကို ယန်း ၀င် ကစားတာက လွဲရင် ကျန်တဲ့ ၃ နေရာက အပြောင်းအလဲ ရှိမှာ မဟုတ် ပါဘူး ။ စမောလင်း မရှိတော့ တဲ့ နောက်မှာ လူငယ် နောက်ခံလူ တွမ်ဇီဘီ အတွက် အခွင့် အလမ်း တွေ အများကြီး ပေါ်လာ ခဲ့ ပါပြီ ။ ဒါကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင် ဖို့ ကတော့ တွမ်ဇီဘီ ရဲ့ တာဝန် ပါပဲ ။
ဆောက်သမ်တန် ဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ နောက်ဆုံး ဆုံတွေ့ ခဲ့တဲ့ ၅ ပွဲ မှာ ၃ ပွဲ ရှုံးပြီး ၂ ပွဲ သရေကျထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် စိန့်မေရီ ခရီးစဉ် ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက်တော့ သောက များမယ့် ခရီး ဖြစ်လာဖို့ နည်းနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် တို့ မမေ့သင့်တာက အခု အချိန် မှာ ဘယ်အသင်းက မှ ယူနိုက်တက် ကို အံ့တုဖို့ စိုးထိတ် မနေ တော့ဘူးဆိုတာ ပါပဲ ။ ကိုယ် ပေါ့ ရင် ကိုယ်ပဲ ခံသွားရမှာပါ ။
ဆောက်သမ်တန် နဲ့ ပွဲမှာ မြင်တွေ့ ရဖွယ် ရှိတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လူစာရင်း –
ဘစ်ဆာကာ ၊ လင်ဒီလော့ဖ် ၊ မက်ဂွဲယား ၊ ယန်း
ရက်ဖိုဒ့် ၊ လင်ဂတ် ၊ ဂျိမ်းစ်
မာရှယျ မပါ ၊ ရှော မပါတဲ့ ယူနိုကျတကျ အသငျး . . . ဆောကျသမျတနျနဲ့ ပှဲမှာ ဘယျလို လူစာရငျးကို သုံးမှာလဲ
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ ပရီးမီး ယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ၃ ) အဖွဈ ယနေ့ ညနေ မှာ ဆောကျသမျတနျ အသငျး ရဲ့ အိမျကှငျး ကို သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျ ကစား ရတော့ မှာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒီပှဲ ဟာ ၃ ပှဲ မှာ ၁ ပှဲသာ နိုငျထားတဲ့ ယူနိုကျတကျ အတှကျ တော့ အလှနျ အရေးကွီးတဲ့ ပှဲ ဖွဈလာမှာ ပါ ။ လကျရှိ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှာ အားထား ရတဲ့ ပှဲထှကျ ကစား သမား ၂ ဦး ဒဏျရာ ရရှိ ထားတာ ကွောငျ့ လူစာရငျး အပွောငျး အလဲ တှေ မွငျတှေ့ ရနိုငျ ပါတယျ ။
တိုကျစဈမှုး အနျတိုနီ မာရှယျ ဟာ ပဲလစျေ့ နဲ့ ပှဲ ပွီးခါ နီးမှာ ဒဏျရာ ရရှိ သှားပွီး အားထုတျ ကစား ခွငျး မပွုနိုငျ တော့ တာကို မွငျတှေ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ လုချရှော ကတော့ ဆကျ မကစားနိုငျ တော့တာ ကွောငျ့ အကျရျှလယေနျး နဲ့ လူစားလဲ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ သူတို့ ၂ ဦး စလုံး ယနေ့ ည ပှဲကို လှဲခြျော ကွမှာပါ ။
ဒီလို အခြိနျ မှာ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှုး တဈဦး ဖွဈတဲ့ အလကျဆဈ ဆနျးခကျြ ဟာ အငျတာ မီလနျ ကို ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ သလို ခံစဈမှုး ဖွဈတဲ့ ခရဈစမောလငျး ကလညျး ရိုးမား ကို အငှား ထှကျသှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒဏျရာ ကစား သမားတှေ ရှိနခြေိနျ မှာ ပှဲထှကျ ကစားနိုငျတဲ့ သူ အခြို့ ကို လကျလှတျ လိုကျရတာ ဟာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အားနညျးခကျြ ဖွဈလာ စနေိုငျ ပါတယျ ။
ဒါကို ဆိုးရှား ဘယျလို ပွငျဆငျ မလဲ . . . နျောဝသေား နညျးပွကွီး ကတော့ အသငျး ကို လူငယျတှေ နဲ့ သာ တညျဆောကျ ဖို့ စိတျပိုငျးဖွတျ ထားပွီး အသကျကွီး ကစား သမားတှေ ကို ရှငျးထုတျ ၊ နရော မပေး တာတှေ လုပျဆောငျ နပေါတယျ ။ မျောရငျဟို လကျထကျ ယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျမှာ ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့ ရခဲ့တဲ့ မာတဈ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၃ ပှဲ စလုံး မပါခဲ့ရ ပါဘူး ။ ညာ တောငျပံ မှာ ၀ငျ ကစားခဲ့ရတဲ့ မာတာ ကလညျး လူစားဝငျ အဖွဈ နဲ့ သာ ကစားခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဆိုးရှား ရဲ့ အသငျး ဟာ ပှဲစဉျတိုငျးမှာ အသကျ အငယျဆုံး အသငျးစာရငျးထဲ ကို ၀ငျခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီပှဲ ကိုလညျး ဆိုးရှား ဟာ လူငယျတှေ အပျေါ ယုံကွညျမှု ပေးသှား ဦးမှာပါ ။ ဘယျ နောကျ ခံလူ နရော ကတော့ ရှေးစရာ မရှိတဲ့ အတှကျ အကျရျှလယေနျး ကို ပွနျထညျ့ ရတော့ မှာပါ ။ ဒါဟာ ဒီဂီယာ တဈယောကျ ဒီပှဲ မှာ ကပ်ပတိနျ မဖွဈတော့ ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျ ပါပဲ ။
မာရှယျ ရဲ့ နရော အတှကျတော့ မဆေငျ ဂရငျးဝုဒျ ကို နရောပေး ဖှယျ ရှိတယျလို့ သုံးသပျမှုတှေ ထှကျပျေါ လာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ဆိုးရှား အတှကျ တကယျ့ကို ကွီးမားတဲ့ အလောငျးအစား ဖွဈလာမှာပါ ။ ဂရငျးဝုဒျ ဟာ မာရှယျ ၊ ရကျဖိုဒျ့ တို့ ထကျ ပိုပွီး အဆုံးသတျ ကောငျးကွောငျး ဆိုးရှား ကိုယျတိုငျ ကွှားလုံးထုတျ ထားခဲ့ ပါတယျ ။ သူပွောတာ မှနျ မမှနျ ဆိုတာ ဒီည စောငျ့ကွညျ့ ရတော့ မှာပါ ။
ပရိသတျတှေ လုံးဝ မကွိုကျပမေယျ့ ဂကျြဆီ လငျဂတျ ကတော့ ပါလာဦးမှာပါပဲ ။ သူ့လို ပွိုငျဘကျ ကစားကှကျ ထဲ ကို ၀ငျရှုပျနိုငျတဲ့ ၊ ပွိုငျဘကျ ကစား သမားတှရေဲ့ ပေးပို့မှု တှေ နောကျ ကို တောကျလြောကျ လိုကျပွီး ဖိအားပေး နိုငျတဲ့ ကစား သမား မြိုးက မြားမြား စားစား မရှိ ပါဘူး ။ လငျဂတျ ရဲ့ အခွားအရညျအသှေးတှကေ မေးခှနျး ထုတျ စရာရှိပမေယျ့ ဆကျတိုကျ ဖိအားပေးနိုငျတဲ့ အရညျအသှေးက အင်ျဂလနျ မှာရော မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ မှာပါ နရော ရရှိစခေဲ့ တာ လို့ ဆိုရငျ မှားနိုငျမယျ မထငျ ပါဘူး ။
ယူနိုကျတကျ ရဲ့ တိုကျစဈမှာ အရေးပါတဲ့ တောငျပံ ၂ ဖကျ ကိုတော့ မားကပျ ရကျဖိုဒျ့ နဲ့ ဒနျနီ ရယျ ဂြိမျးဈ တို့ ပှဲထှကျ လာမှာပါ ။ ဂြိမျးဈ ဟာ ပဲလစျေ့ နဲ့ ပှဲ တုနျးက ဒုတိယပိုငျး မှာ ဘယျတောငျပံ ကို ပွောငျး ကစားခဲ့ရပွီး ညာတောငျပံ မှာ ထကျ ဘယျတောငျပံ မှာ ပိုကောငျးအောငျ ကစားနိုငျကွောငျး မွငျတှေ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒီည မှာ ဂြိမျးဈ ကို ဘယျတောငျပံ ၊ ရကျဖိုဒျ့ ကို ညာတောငျပံ မှာ နရော ခြ ထားမယျ ဆိုရငျ ပိုပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ တိုကျစဈ ကစားပုံ ကို ရရှိ နိုငျ ခရြှေိ ပါတယျ ။
ကှငျးလယျ မှာတော့ တျောမီနေး နဲ့ ပေါလျ ပေါ့ဘာ တို့ ကို ဆကျလကျ မွငျတှေ့ ရဦးမှာပါ ။ ပေါ့ဘာ ကတော့ အသေုံးလုံး ဓါတျခဲ တှေ အကွားရောကျနတေဲ့ ယူရနေီယံလောငျစာတောငျ့ကွီးလို ပါပဲ ။ ဒီအနအေထား ကို ပေါ့ဘာ မနှဈသကျပမေယျ့လညျး ပွငျသဈသား ကို ယူနိုကျတကျ က မရ မက ဆှဲထား ဦးမှာပါ ။ ဒါကွောငျ့ ပှဲတှေ ကို ဆကျကစားမလား ၊ ပုနျကနျ ပွီး လကေ့ငျြ့ခနျး မဆငျးဘဲ အသငျးနဲ့ ပွဿနာ တကျပွီး အရနျ အသငျး ကို ရောကျသှား မလား ၊ ပေါ့ဘာ က ဒီလောကျတော့ မိုကျမဲမယျ့ သူ မဟုတျပါဘူး ။
နောကျတနျး ကတော့ ရှော နရော ကို ယနျး ၀ငျ ကစားတာက လှဲရငျ ကနျြတဲ့ ၃ နရောက အပွောငျးအလဲ ရှိမှာ မဟုတျ ပါဘူး ။ စမောလငျး မရှိတော့ တဲ့ နောကျမှာ လူငယျ နောကျခံလူ တှမျဇီဘီ အတှကျ အခှငျ့ အလမျး တှေ အမြားကွီး ပျေါလာ ခဲ့ ပါပွီ ။ ဒါကို ကောငျးကောငျး အသုံးခနြိုငျ ဖို့ ကတော့ တှမျဇီဘီ ရဲ့ တာဝနျ ပါပဲ ။
ဆောကျသမျတနျ ဟာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ နောကျဆုံး ဆုံတှေ့ ခဲ့တဲ့ ၅ ပှဲ မှာ ၃ ပှဲ ရှုံးပွီး ၂ ပှဲ သရကေထြားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ စိနျ့မရေီ ခရီးစဉျ ဟာ ယူနိုကျတကျ အတှကျတော့ သောက မြားမယျ့ ခရီး ဖွဈလာဖို့ နညျးနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ တို့ မမသေ့ငျ့တာက အခု အခြိနျ မှာ ဘယျအသငျးက မှ ယူနိုကျတကျ ကို အံ့တုဖို့ စိုးထိတျ မနေ တော့ဘူးဆိုတာ ပါပဲ ။ ကိုယျ ပေါ့ ရငျ ကိုယျပဲ ခံသှားရမှာပါ ။
ဆောကျသမျတနျ နဲ့ ပှဲမှာ မွငျတှေ့ ရဖှယျ ရှိတဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ လူစာရငျး –
ဘဈဆာကာ ၊ လငျဒီလော့ဖျ ၊ မကျဂှဲယား ၊ ယနျး
ရကျဖိုဒျ့ ၊ လငျဂတျ ၊ ဂြိမျးဈ